Friday 21st of January 2022 / 01:23:41 PM
यस्ताे छ युट्युबमा अपलोड गरिएको पहिलो भिडियो:सबैले हेर्नुहाेस्
सन् २००५ को अप्रिल २३ बाट युट्युब सुरु भएको हो ।यो अहिले सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने भिडियो स्ट्रिमिंग इन्टरनेट प्लेटफर्म बनेको छ ।
सुरु भएकै दिन युट्युबमा पहिलो भिडियो अपलोड गरिएको थियो ।
युट्युबमा अपलोड गरिएको पहिलो भिडियो
के तपार्इकाे मोबाइलको ब्याट्री छिटो सकिन्छ? चिन्ता नगर्नुस,अपनाउनुहाेस् यी ७ टिप्स
तपाईको मोबाइलको ब्याट्री छिटो सकिन्छ? चिन्ता नगर्नुस, यी ७ टिप्स अपनाउनस, घन्टौसम्म मोबाइल चलाउनुस ।
स्मार्टफोन निर्माता कम्पनीले धेरै क्षमताको ब्याट्री सार्वजनिक गरिरहेका छन् । तर पनि मोबाइलले धेरै लामो समय ब्याट्री टिकाउँदैन । मोबाइल प
आयो फास्ट चल्ने Wifi जस्तै Lifi
अनलाइन दर्पण 2018-07-23
सामान्यतया: इन्टरनेट प्रयोगका लागि वाईफाई प्रविधि सबैभन्दा लोकप्रिय र विश्वसनीय मानिन्छ ।
वाइफाईको पूरा रुप वायरलेस फिडेलिटी हो यसमा सीमित क्षेत्रभित्र बिना तार रेडियो तरङ्गको माध्यमबाट सुचना संजालको निर्माण गरिन्छ । यसलाई वायरलेस अडप्टर
अनलाइन दर्पण 2018-07-15
केही समयअघि लण्डनका एक मनोचिकित्सक डा. डेभिड भिलले लगातार सेल्फी खिचिरहनु बानी नभए
ईन्टरनेट र टेलिफोन शुल्क बढ्दै
काठमाण्डौं । विश्वमै इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा शुल्क घट्दै जाँदा नेपाली उपभोक्ताले भने साउन १ देखि थप महँगो मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन्।
अन्य मुलुकमा इन्टरनेट सेवामा नयाँ प्रविधि र सस्तो मूल्य बनाउन प्रतिस्पर्धा चलिरहेको बेला सरकारले भ
फेसबुक चलाऊन नपाउदा युवतीले गरिन् आत्महत्या
फेसबुक चलाऊन नपाएको झोकमा एक १५ बर्षीय युवतीले आत्महत्या गरेकी छिन् ।
अर्घाखाँची जिल्लाको भुमिकास्थान नगरपालिकाकाे डाँडा पोखरी शान्ति मा.वि मा कक्षा १० मा अध्यनरत सुनिता थापाले आज बिहान झुन्डिएर आत्महत्या गरेकी हुन् ।
नेपाल टेलिकमको ‘मिस्ड कल एलर्ट’ सेवा पुनः सुरु
अनलाइन दर्पण 2018-05-28
नेपाल टेलिकमले मिस्ड कल एलर्टसेवालाई पुनः सञ्चालन गर्ने भएको छ । गणतन्त्र दिवस २०७५ को अवसरमा कम्पनीले सो सेवा भोलि भोलिदेखि पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।
जीएसएम पोष्टपेड तथा पि्रपेड मोबाइलमा यो सेवा उपलब्ध हुनेछ । यो सेवा शुभारम्भ भए
यी हुन् इतिहासकै लोकप्रिय १० मोबाइल फोन
अनलाइन दर्पण 2018-05-26
पछिल्ला वर्षहरुमा मोबाइल फोनको डिजाइन तथा फिचर्सको मामिलामा निकै तीव्र रुपमा विकास तथा परिवर्तन भइरहेको छ । स्मार्टफोन निर्माताहरु आफ्ना प्रडक्टहरुमा अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न तछाड-मछाड गरिरहेका छन् । तर यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय कम्पनीहरु आफ्
ल्यापटप ‘स्लो’ भयो ? त्यसो भए यी टिप्स अपनाएर बनाउनुस् ‘फास्ट’
अनलाइन दर्पण 2018-05-17
हामीमध्ये धेरैसँग ल्यापटप छ । आफूले चाहेको स्थानमा सजिलै पुर्याउन सकिने भएकाले यसको प्रयोग बढ्दो छ । यसले हामो कामलाई निकै सजिलो पनि बनाएको छ । तर तनाब त्यतिबेला हुन्छ जब समस्या समाधानमा लागि प्रयोग गरिने ल्यापटप आफैं तनावको कारण बन्ने गर्छ । ल्या
के तपाई जोडी नपाएर चिन्तित हुनुहुन्छ ? अब कुनै चिन्ता छैन– फेसबुकले नै जोडी खोजिदिने
अनलाइन दर्पण 2018-05-13
क्यालिफोर्निया । आजको समयमा विकास तथा प्रविधिले निकै ठूलो फड्को मारेको छ । आजभोलि कुराकानी गर्नका लागि टाढाटाढा सम्म टेलिफोनबाट आफन्तसँग कुरा गर्ने, हुलाकबाट चिठी आदानप्रदान गर्ने झन्झटबाट मुक्त भइसकेका छन् । अहिले सबैको हात–हातमा आधुनिक किस
सावधान ! तपाईँको फेसबुक अरु कसैले त चलाएको छैन ? यस्ताे छ समाधानकाे उपाय
अनलाइन दर्पण 2018-05-07
कतै तपाईँको फेसबुकको पासर्वड अरुलाई त थाहा छैन ? तपाईँको फेसबुक तपाईँले थाहा नपाइकन कसैले लुकेर त चलाइराखेको छैन ।
यदि तपाईँलाई आफ्नो फेसबुक कसैले चलाइराखेको छ कि भन्ने डर छ भने त्यो डर हटाउनुहोस् । कहिलेकाहीँ कसैको मोबाइल वा ल्याप
फेसबुकमा कमेन्ट गर्दा दुई घाइते
काठमाडौं, १४ वैसाख । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेको कमेन्टको विषयलाई लिएर दुई समूहका युवाबीच झगडा हुँदा झापाको दमकमा बिहीबार दुईजना घाइते भएका छन् ।
युवा समूहवीच छुरा तथा बोतल हानाहान हुँदा दमक–५ का दुई युवा घाइते भएका हुन् ।
यसरी लिनुहोस् एनसेलबाट दैनिक १ घण्टाको निःशुल्क भिडियो स्ट्रिमिङ बोनस
काठमाडौं – एनसेल प्राइभेट लिमिटेडले ‘फ्यूलयोर फन’ योजनाअन्तर्गत आफ्नाग्राहकका लागि अल टाइम डेटा प्याकलाई थप सुलभ बनाउँदै ‘सही’ डटा प्याक ल्याएको छ । यस नयाँ ‘सही’ डेटा प्याकमा ग्राहकले विद्यमान अल टाइम डेट
टेलिकमको ‘नमस्ते क्रेडिट’ शुरु, यसरी लिनुहाेस् सुविधा
काठमाडौँ / नेपाल टेलिकमले प्रिपेड मोबाइलमा ब्यालेन्स सापटी लिन सकिने सेवा ‘नमस्ते क्रेडिट’ शुरु गरेको छ । टेलिकमद्वारा यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले ‘नमस्ते क्रेडिट&
कक्षा १० सम्म अध्ययन गरेका चेपाङ युवाले बनाएको हेलिकोप्टर ४० मिनेट आकाशमा उड्यो
अनलाइन दर्पण 2018-03-18
काठमाडौं, ४ चैत्र । देशकै पिछडिएको र लोपोन्मुख जातिको सूचिमा रहेको चेपाङ समुदायका एक युवा आफैले बनाएको हेलिकोप्टरमा ४० मिनेटसम्म आकाशमा उडान भर्न सफल भएका छन् । विगत दुई महिनादेखि हेलिकोप्टर बनाउन सक्रिय २३ वर्षिय सरोज चेपाङले आइतवार विहान गर
आजको युगमा सामाजिक सञ्जाल निकै शक्तिशाली माध्यम मानिन्छ । सामाजिक सञ्जालका प्रयोग कर्ताहरु पनि हरेक दिन बढिरहेका छन् । मानिसहरू खुल्ला रूपमा यसको बारेमा चिन्ता गर्दै छन्।
मानिसहरू आफूले गर्दैछु, कस्तो महसुस गरिरहेको छु के कुराले समस
फेसबुकमा फोटो अपलोड गर्दा यी यि चार कुराहरुमा ध्यान दिने गराैं
अनलाइन दर्पण 2018-01-27
फेसबुकमा करीब ३५ करोड नयाँ फोटो प्रत्येक दिन अपलोड हुन्छन् । यति धेरै फोटो अपलोड र डेटा स्टोर भएपछि फेसबुक साइट स्लो हुनु स्वभाविक हो । कहिले क
तपार्इंहरु मध्ये धेरैले त सुन्नु भएकै होला ‘एन्ड्रोइड रुट’को बारेमा। एन्ड्रोइड फोन रुट गर्न पाए धेरै फाइदा होला भन्ने सोच्नु भएको होला। यो लेखमा एन्ड्रोइड रुट भनेको के हो? कसरी गरिन्छ? यसका फाइदा र बेफाइदा के छन्? भन्ने सेरोफेरोम
सावधान ! फेसबुकमा देखिने यस्ता लिंकहरुमा क्लिक गर्दै नगुर्नहोस्
एजेन्सी ।फेसबुकमा केही महिनायता ‘माई फर्स्ट भिडियो’को नामबाट साथीको एकाउन्बाट तपाईंलाई आइरहेको छ । साथीहरुलाई समेत ट्याग गरेर तपाईंको म्यासेज बक्समा आएको यो भिडियोलाई क्लिक गरि हेर्न भनिएको हुन्छ ।
तीब्र गतिमा फैलिरहेको यो भा